राजनीति – SawalNepal
बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय वैठक, होला त भोलि पोलिटव्यूरो अनुमोदन ?
काठमाडौं, २ जेठ । पार्टी एकताको अन्तिम घोषणाका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय वैठक बालुवाटारमा बसेको छ ।एकताको एक वर्ष र मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा शुक्रबार विशेष कार्यक्रम गर्ने तयारी स्वरुप सचिवालय वैठक बसेको नेकपा स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेकपाले एकता प्रक्रिया टुङ्गो लगाएको घोषणा समेत सोही कार्यक्रममा गर्ने तयारी गरेको छ
एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएको करिब एक वर्षपछि बल्ल नेकपाले पोलिटब्यूरो गठन गरेको छ। १४७ सदस्यीय पोलिटब्यूरोमा ८१ जना पूर्व एमाले र ६६ जना पूर्व माओवादी तर्फबाट चयन गरिएको छ। पूर्व एमालेको तर्फबाट पहिले पोलिटब्यूरोमा रहेका ५९ जना नेकपाको पोलिटब्यूरोमा रहने सहमती भएपनि थप २२ जनाको टुंगो लगाउन हम्मे परेको थियो। त्यस्तै पूर्व माओवादीको
समाजवादी पार्टीको पदाधिकारीमा कोको? कसले के जिम्मा पाए ?
काठमाडौं- संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालबीच एकता भएर बनेको समाजवादी पार्टीको पदाधिकारी घोषणा गरिएको छ। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एकता समारोहमा डा बाबुराम भट्टराईले पदाधिकारीको नाम पढेर सुनाएका थिए। संघीय परिषद् अध्यक्षको नाम भने उपेन्द्र यादवले पढे। यस्तो छ पदाधिकारीको नामावली संघीय परिषद्का अध्यक्ष– डा बाबुराम भट्टराई केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष– उपेन्द्र यादव वरिष्ठ नेता–
काठमाण्डौ – नेपालका पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका पूर्व अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । विसं १९७८ सालमा काठमाण्डौमा जन्मेका अधिकारीको २०५६ साल वैशाख १३ गते निधन भएको थियो । लामो राजनीतिक संघर्षको क्रममा उहाँले १७ वर्ष जेल जीवन बिताउनुभएको थियो । पढाइको सिलसिलामा भारतको बनारसमा रहँदा भारत छोडो आन्दोलनमा
काठमाडौं, १३ वैशाख । नेकपाका शीर्ष नेता पोलिटब्युरो गठनमा जुटेका छन् । वैशाखभित्रै पोलिटब्युरो गठन, कार्य विभाजन र जनसंगठनको एकता टुंगो लगाउनुपर्ने दबाबमा नेताहरू छन् । आगामी सचिवालय बैठकबाट पोलिटब्युरो गठन हुने नेताहरूले बताए । ‘वैशाखभित्रै पार्टी बैठक बसेर पोलिटब्युरो गठन गर्ने र नेताहरूको कार्य विभाजन टुंग्याउने काम सँगसँगै हुनेछ’, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।
गाउँपालिका अध्यक्षका भाइले आफ्नै पार्टीका वडा अध्यक्षलाई यसरी थर्काएपछि….(हेरौं भिडियोमा)
झापा । कचनकवल गाउँपालिका अध्यक्ष अञ्जार आलमका भाई मो. शेर आलमले- ‘मनपरी तन्त्र होइन, पारर्दिश हुनुपर्छु’ भन्दै आफ्नै पार्टी (राप्रपा) का वडा अध्यक्ष महेशलाल गणेशलाई यसरी थर्काए/ (हेरौ यो भिडियो) कचनकवल गाउँपालिका अध्यक्षका भाईले आफ्नै पार्टीका वडा अध्यक्षलाई यसरी थर्काए (हेरौ यो भिडियो) कचनकवल गाउँपालिका अध्यक्षका भाई मो. शेर आलमले- 'मनपरी तन्त्र होइन, पारर्दिश हुनुपर्छ'
कस्तो बन्दै छ नेकपा पोलिटब्युरो ? यी हुन् पूर्व एमालेका ८१ र पूर्व माओवादीका ६६ नेता
काठमाडौं, १२ बैसाख । जिल्ला एकीकरण टुंगिए लगत्तै सत्तारुढ नेकपाले पोलिटब्युरो तहको एकता अघि बढाएको छ । तीन प्रमुख नेता अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सहमतिमा पोलिटब्युरो चयनको गृहकार्य अघि बढाएका हुन् । केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ रहने गरी पोलिटब्युरो कमिटी गठन हुने नेकपा विधानमा व्यवस्था छ । चार सय ४१ जना केन्द्रीय
यस्तो बन्दैछ नेकपाको पोलिट्ब्यूरो (एमाले तर्फको सूची)
काठमाडौ‌ं, वैशाख ११ । पार्टी एकता घोषणा भएको ११ महिनापछि मात्र जिल्ला नेतृत्वमा सहमति जुटाउन सफल भएको सत्तारुढ नेकपामा अब पोलिट्ब्यूरो गठनका लागि कसरत सुरु भएको छ । नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाई १ सय ४७ सदस्यीय पोलिट्ब्यूरोमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबाट क्रमशः ५५ र ४५ प्रतिशतको अनुपात अर्थात् क्रमशः ८२
काठमाडौं – नेकपाका ७७ जिल्ला अध्यक्ष र सचिव बनाइएका १५४ जना नेतामध्ये ५३ जनाले दोहोरो जिम्मेवारी पाएका छन् । केही नेताले भने तेहेरो जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रतिनिधिसभाका ११, राष्ट्रियसभाका १, प्रदेशसभाका २४ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ७ गरी ४३ जना नेताले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी पाएका छनु् । यस्तै विभिन्न तहका थप जनप्रतिनिनि
यी हुन् नेकपाका ७७ जिल्ला अध्यक्ष र सचिव- हेर्नुहोस नाम सहित
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का ७७ वटै जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र सचिवको नाम लोकान्तरलाई प्राप्त भएको छ । नेकपा सचिवालयको आइतवार बसेको बैठकले नाम टुंगो लगाएको थियो । प्रज्ञा भवनमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नामावली सार्वजनिक गरिँदैछ । हेर्नुहोस्, सूची :